Love – Liebe – Tips for refugees
Category: Love – Liebe
Waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah. Waxaan u malaynayaa in aan jeclahay wiil kale. Ma tahay midaasi mid mamnuuc ah ama reeban? Maxaan samayn karaa?
In qofka uu jeceyl ku dhaco waa dareen aad u wanaagsan mana ka ahan mamnuuc ama mid ka reeban gudaha dalka Jarmal!
Mararka qaar gabar ayaa jeceyl u qaadaysa gabar kale.
Mararka qaarna wiil ayaa jeceyl u qaadaya wiil kale.
Midaasi gebi ahaanba waa mid caadi ah.
Ma ahan mid mamnuuc ah ama reeban.
Waddamada iyo diimaha qaarkooda, dadku waxay dhahaan midaasi waa dambi wayn.
Sidaas darteeda waxaa laga yaabaa in aad u malaysid in dareemahaagu ay yihiin kuwo xun.
Sidaas darteedna ma doonaysid in aad qaadid dareemahaasi.
Laakiin anagu waxaynu jecelnahay in aad oggaatid:
In dareemahaagu ay yihiin kuwo dabiici ah oona ahayn dambi.
Adigu ma dooran kartid dareemahaaga.
Dareemahaagu waa kuwo caadi ah.
Mararka qaar dadku waxay u arkaan in ay wanaagsantahay in aad qof u sheegtid.
Laakiin in dareemahaaga qof loo sheego ma ahan mid fudud waxayna u baahantahay geesinimo.
Dabcan waxaad kala hadli kartaa dareemahaaga qof aad ku kalsoontahay.
Waxaad ka heli doontaa caawimaad badan boggaan internetka ah: www.sextra.de
Waxaan jeclahay gabar. Dhabtiina waxaan jeclahay in aan xiriir la sameeyo. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?
In jeceyl la qaado waa wax wanaagsan.
Waxaad doonaysaa in aad wakhti badan ayada la qaadatid.
Waxaad doonaysaa in aad u sheegtid in aad jeceshahay.
Taasina waa mid wanaagsan oona caadi ah!
Laakiin mararka qaar waxaad u malaynaysaa in ay arinta u socoto si tar-tiib ah.
Waxaa dhici karta in ay ayaduna ku jeceshahay.
Waxaa dhici karta in aysan arinta hubin.
Waxaa dhici karta in aysan ku jeclayn.
Waxyaabaha uu qofka kale jecelyahay waa kuwo aad muhiim u ah.
Adiga waxaa laguu oggolyahay marwalba in aad sheegtid waxa aad doonaysid.
Adiga waxaa laguu oggolyahay in aad sheegtid ama cabirtid dareemahaaga.
Weydii gabadha waxa ay ayadu rabto.
Ayadana sidoo kale waxaa loo oggolyahay in ay sheegto waxa ay dareemayso iyo waxa ay rabto.
Adigu laguuma oggola in aad ayada taabato ama dhunkato haddii aysan ayadu midaasi doonaynin.
Laakiin ayadana sidoo kale looma oggola in ay ku taabato ama ku dhunkato haddii aadan midaasi doonaynin.
Posted on July 26, 2016 Author editorialteamCategories Love - Liebe
Waxaan jeclahay in aan la saaxiibo gabar Jarmal ah. Maxaa ila gudboon in aan sameeyo?
Sideed ku baranaysaa gabdhaha jooga dalka Jarmalka?
Iskuulka, ciyaarida ciyaaraha, naadiyooyinka iyo meelaha lagu dheelo ee diskiyoowyada ah iyo xafladaha.
Saaxiibo ayaa ku baraya.
Gabdhaha iyo wiilasha waxay doonayaan in ay baashaalaan.
Waxaa dhici karta in ay u labistaan si ka duwan sidii aad u baratay.
Taasi waa mid caadi ka ah halkan.
Macnaheedu kama dhigna in ay yihiin dad xun.
Waxay mudanyihiin in lagu ixtiraamo doorashadooda.
Xitaa haddii ay xirtaan dhar qaawan, macnaheedu ma ahan ayagu in ay doonayaan in la taabto.
Waxay doonayaan in ay inbadan kula hadlaan.
Inbadan oo wiilasha iyo gabdhaha kamid ahi waa kuwo si aad ah isaga taxadira.
Waxay fiiriyaan haddii ay arinta sii wadi karaan.
Kadibna waxay ku dhacaan jeceyl.
Ayagu kaliya waxay isdhunkan karaan marka ay labudaba sidaasi doonayaan.